18 | June | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Rohingya News voa Burmese by Bolu Finland
Rakhine Buddhists Vs Rohingya Muslims
Daw Suu:”ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံရမှု၊ မညီမျမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလို တခြားအချက်တွေအားလုံးကိုပါ အဆုံးသတ်ရမှာပါ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ အဆုံးသတ်သွားရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံရမှု၊ မညီမျမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလို တခြားအချက်တွေအားလုံးကိုပါ အဆုံးသတ်ရမှာပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ = Discrimination, Equal Rights and Poverty must be removed to get Piece! BRAVO. We, Muslims just want2of that Daw Suu mentioned.
ပြသနာတက်အောင် မီးမွှေးနေသူတွေ ဟာ အွန်လိုင်းလူသတ်သမားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်
Hmu Zaw, Director of the President’s office is the PRIME MOVER & Instigator of Riots in Rakhine
Source:Mg Mhan ပြီးပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ယဉ်ကျေးတယ် ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ရပ်တည်တယ် စာနာတယ် သိမ်မွေ့တယ် အသားအရောင် ခွဲခြားမှု မရှိဘူး…. ဒါပေမယ့် နိုင်ငံလူဦးရေ သန်း ၆၀ကျော်မှာ အိုင်တီသုံးတာ ၁ရာခိုင်နှုံးဘဲမပြည့်ချင် ပြည့်ချင်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ ထဲမှာ မြန်မာ အမည်ခံပြီး အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ သူတကာကို ရစရာမရှိအောင်ဆဲနေသူတွေ အခြား ဘာသာအကြောင်းဘာမှ မသိဘဲ ပုတ်ခတ်သူတွေ၊ ပြသနာတက်အောင် မီးမွှေးနေသူတွေ ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားပျက်ဆီးရာပျက်စီးကြောင်း လုပ်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမား အွန်လိုင်းလူသတ်သမားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကို မလွဲမသွေခံစားကြရမှာပါ။
Myanmar burning: dramatic images of mob violence – Rough Cuts
Proof of Terrorist Rakhine burning houses indiscriminately
ရခိုင်သားအိမ်ပါဗျို့….. မှားမှာစို့လို့…… 😛 (ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှေ့တွင် ရေးထားသည့်သင်ပုန်း။ စ⁠စ်တွေမြို့)
Proof of Terrorist Buddhist Rakhines burning houses indiscriminately
စစ်တွေမြို့၊ မြို့သူကြီးရပ်၊ ဘဖြူလမ်း မီးလောင်မှုအပြီး နယ်မြေရှင်းလင်း။ စစ်တွေမြို့၊ မြို့သူကြီးရပ်၊ ဘဖြူလမ်းရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပိုင် နေအိမ်။ Messenger News Journal မှလှစ်ဟပြနေသောအမှန်တရား။
Tags:Buddhism, Burma, Muslim, Rakhine people, Rakhine State, Religion and Spirituality, Rohingya people, Sittwe